Tag: ogeysiisyada biraawsarka | Martech Zone
Tag: ogeysiisyada biraawsarka
Fikradda Black Friday iyo Cyber ​​Isniinta oo ah maalin qura oo hal maalin ah ayaa is bedeshay sannadkan, iyadoo tafaariiqleyda waaweyn ay xayaysiiyaan Black Friday iyo Cyber ​​Monday heshiisyo guud ahaan bisha Nofeembar. Natiijo ahaan, way ka yaraatay ku mashquulinta hal-mar, heshiis hal-maalin ah sanduuqa horeyba loo soo buuxiyay, iyo inbadan oo ku saabsan dhisida istiraatiijiyad muddada-dheer ah iyo xiriir lala yeesho macaamiisha inta lagu jiro xilliga fasaxa oo dhan, iyadoo la soo bandhigayo fursadaha ganacsi ee saxda ah waqtiyada saxda ah
Waxaan dhibaato weyn ku qabnaa warshadaha ka kooban waxyaabaha ku jira. Ficil ahaan kheyraad kasta oo aan ka aqriyo suuq geynta waxyaabaha la xiriira waxay la xiriiraan helitaanka martida cusub, gaaritaanka dhagaystayaasha cusub ee bartilmaameedka ah, iyo maalgashiga kanaallada soo koraya. Kuwaasi dhammaantood waa xeelado helitaan. Helitaanka macaamiisha ayaa ah tan ugu tartiib-tartiib badan, ugu adag, uguna qaalisan ee kordhinta dakhliga iyadoon loo eegin wax warshadeed ama nooc alaab ah ah. Maxay xaqiiqadan ugu lumisay xeeladaha suuqgeynta waxyaabaha ku jira? Waxay ku dhowdahay 50% way fududahay